Marsaalee ugguraman VPN Opera'tiin daawachuuf - OROMO ICT
Marsaalee ugguraman VPN Opera’tiin daawachuuf
March 6, 2017 ICT Tutorial, Mobile TutorialAbdisa Bencha Jara
Marsaalee ugguraman VPN operaatiin daawachuuf
Har’a akkuma baratame, wanta guddaa tokko isiniif qooduu barbaade. Hedduun keenya moobayila keenyaafis haa tahuu koompiitara keenyaaf ‘browser’ gaariidha jennee kan filannu Opera dha.
Sababni namni hedduun Opera filatuuf, saffisa isaa fi qusannoo inni maallaqaaf qabuuti. Bara darbe kaampaanichi moosaajilee maallaqa heddu fixan kan too’achuuf gargaaru, tajaajila Opera Max jedhamu itti fayyadamtoota isaaf hojjatee, jaalatamummaa isaa guddifate.
Baruma darbe kana gara xumuraa irratti Opera VPN kan jedhamu tajaajila marsaalee ugguraman kamiinuu ittiin daaw’achuuf kan tajaajilu oomishee itti fayyadamtoota isaaf dhiyeeseera.
VPN opera’n hojjate kun, tolaan tajaajila yeroo dheeraa kan kennuudha. Akkuma beekkamu VPN’n hedduun tajaajila tolaa yeroo muraasaa qofa erga kennanii booda, kafaltii kan nama kafalchiisaniidha. Garuu Opera VPN’n miti.
Akkamitti arganna Opera VPN?
Iddoo opera VPN argatti isinitti himuun dura, opera vpn maal irratti akka hojjatu isinitti haa himuu. Opera VPN kan hojjatu moobaayiloota Android fi iOS irratti. Kana malees, koompiitara irratti ni hojjata.
Moobaayiloota android tiif playstore keessaa salphumatti buufattanii itti fayyadamuu dandeessu. Akkasuma warri iOS fayyadamtan immoo iTune keessaa ni argattu. Koompiitara irratti fayyadamuuf immoo gara marsaa opera deemuudhaan, browser isaanii buufadhaan itti fayyadamuu qofa.
Yoo kana jedhu; erga buufattee booda yoomessa browser keessa seente akka suuraa armaan irratti argitu kanatti banuu/enabe/ gochuu qabda jechuudha.
OROMO ICT [sgmb id=”1″]
← Bilbila isin jalaa bade yookiin hatame barbaaduuf: OROMO ICT	Hiriyyaa Amanamaa[Trusted Contacts]: OROMO ICT →
One thought on “Marsaalee ugguraman VPN Opera’tiin daawachuuf”
Hi akam jirttan. .Anii mobayli kiyya galaxy s i897 tidha garru play stor(Google play) khessa wattakalle bufachun dadhabbe nadidde malif akka tahe nahimttu? Galatoma
Total Hits : 478463